सेवाग्राहीलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न महाकाली र मेडासिटी अस्पतालले सहकार्य गर्ने – Puleso
सेवाग्राहीलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न महाकाली र मेडासिटी अस्पतालले सहकार्य गर्ने
महेन्द्रनगर/होम योगी – महाकाली अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि महाकाली अञ्चल अस्पताले र नेपाल मेडासिटी अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । सेवाग्राहीलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न महाकाली अञ्चल अस्पताल र नेपाल मेडासिटी अस्पतालबिच सहकार्य गर्ने भएको छ । शनिबार जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरको आयोजनमा महाकाली अञ्चल अस्पतालका समस्या र सुधारका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले महाकाली अस्पताल सुधारमा आफुहरु आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन् । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अशोक पाण्डेयले मेडासिटी अस्पतालसँग सहकार्य गरेर महाकाली अञ्चल अस्पतालमा बन्द भएका सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गरिने बताए । उनका अनुसार महाकाली अञ्चल अस्पतालसँग सहकार्य गरेर विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल मेडासिटी अस्पताल तयार रहेकोे बताए । अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको अभावमा सेवाग्राही समस्यामा परेको र मेडासिटी अस्पतालको सहयोगमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने बताए ।अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर सहित अन्य २७ जनाको दरबन्दी छ ।
‘दरबन्दी अनुसार सरकारले डाक्टरको व्यवस्थापन गरिदिएन, बाध्य भएर निजि अस्पतालसँग सहकार्य गरेर विशेषज्ञ सेवा दिने तयारी गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष पाण्डेयले भने ।
नेपाल मेडासिटी अस्पतालसँग सहकार्य गरेपछि सेवाग्राहीको उपचारका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्ने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षले बताए । उनका अनुसार महाकाली अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा बिरामीलाई रिफर गर्नुपर्ने बाध्य छ । ‘नेपाल मिडासिटी अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, यस विषयमा २ महिनादेखि छलफल गरिरहेको बताए ।
नेपालीले उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटाउन नेपाल मेडासिटी अस्पतालल सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेको नेपाल मेडासिटी अस्पतालका डा. विजय रिमालले बताए । उनका अनुसार मेडासिटी अस्पतालले पहिलो पटक महाकाली अञ्चल अस्पताल र सिन्धुली अस्पतालसँग सहकार्य गरेर विशेषज्ञ सेवा दिने तयारी गरिरहेको छ । ‘महाकाली अञ्चल अस्पतालसँग सहकार्य गर्न अस्पतालको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका बताए ।
साउन १ गतेदेखि विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा साउन १ गतेदेखि विशेषज्ञ सेवा सुरु हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य दिपकप्रकाश भट्टले बताए । उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्ने गरि नेपाल मेडासिटी अस्पतालसँग सहकार्य भएको छ । ‘यहाँ आवश्यक उपकरण प्रयाप्त छन्, डाक्टरको अभाव थियो, त्यो निजि अस्पतालसँग सहकार्य गरेर समाधान गर्ने बताए
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा मेडिकल कलेज स्थापन गर्न मन्त्रालयमा र सम्बन्धित निकायमा पहल छलफल भइरहेको बताए ।
‘विशेषज्ञ डाक्टर ल्याउन पहल गरिरहेका छौं’
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर ल्याउन सम्बन्धित निकाय पहल भइरहेको कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदहरुले बताएका छन् । शनिबार जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनमा भएको महाकाली अस्पताल समस्या र सुधार विषयको कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले अस्पताल सुधारका लागि आफुहरु लागि परेको बताए ।
‘हामी सम्बन्धित निकायमा यहाँ समस्या राखि रहेका छौं, अस्पतालमा थुप्रै समस्या छन्,’ उनले भने । चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार महाकाली अञ्चल अस्पतालमा रहेका समस्या समाधान गरिने प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर सुनारले बताए । ‘चुनावमा गरेका बाँचा बिर्सेको छैन्, यहाँका स्थानीयले पुचार गर्न भारत जानु पर्ने बाध्यता चाडै समाधान हुन्छ,’ सुनारले भने ।
राजनीतिक दलले अस्पताल बिगा¥यो
महाकाली अञ्चल अस्पताल राजनीतिक दलका करणले बिग्रिएको हेल्प नेपालका अध्यक्ष मदन चन्दले बताए । ‘अस्पतालमा राजनीति धेरै भएको छ, डाक्टरमाथि हातपात गर्ने पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन्,’ भने । महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पंखा जडान गरिएका अधिकांस पंखा र बक्ती नचल्ने गरेको बताए ।
अस्पताल सुधार गर्ने विषय छलफलमा सिमित
महाकाली अञ्चल अस्पताल सुधार गर्ने विषयमा छलफल मात्र सिमित हुने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खड्काले बताए । ‘लामो समयदेखि अस्पतल सुधार गर्ने भनेर छलफल हुँदै आएको छ, छलफलको उपलब्धी सून्य हुन्छ, अस्पतालमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सबै एक हौं,’ उनले भने । महाकाली अञ्चल अस्पतालका कर्मचारी डाक्टरले सेवाग्राहीसँग गर्ने ब्यबहार राम्रो नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टले बताए । ‘डाक्टर र कर्मचारीले सेवाग्रहीसँग राम्रो व्यवहार गर्नु आवश्यक छ, यसमा सुधार भए अस्पतालमा सेवाग्राही आउँछन्,’ भने ।
महाकाली अञ्चल अस्पतालले लामो समयदेखि डाक्टरको अभाव झेल्दै आएको छ । महाकाली अञ्चल अस्पतालमा २०६४देखि अहिलेसम्म दरबन्दी अनुसार डाक्टर नभएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरसहित २७ जनाको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाल ३ जना विशेषज्ञ सहित ९ जना डाक्टर छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक÷पटक विशेषज्ञ डाक्टर माग गर्दा समेत समस्या समाधान नभएको अध्यक्षले बताए । ‘विशेषज्ञ डाक्टरको अभावले बिरामीलाई रिफर गर्नु परेको छ,’ भने ।
आन्तिरिक समस्या कारण महाकाली अञ्चल अस्पताल सुधार नभएको महाकाली अञ्चल अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष भोजराज बोहराले बताए । ‘यहाँका अन्तिरिक समस्या समाधानमा सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ , र अस्पतालमा भौतिक संरचनाको समेत अभाव रहेको पूर्व अध्यक्ष बोहराले बताए । ‘अस्पतालसँग जमिन प्रयाप्त छ, नर्सिङ क्वाटर बनाउनु आवश्यक छ, यो समस्या प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यले चासो दियो भने सामाधान हुन्छ,’ पूर्व अध्यक्ष बोहराले बताए ।
आवास कर्मचारीको कब्जामा
महाकाली अञ्चल अस्पतालको वतावरण सुधार गर्नु आवश्यक रहेको नागरिक समाज कञ्चनपुरका संयोजक भबराज रेग्मीले बताए । ‘अस्पताल प्रशासनले सहज रुपमा डाक्टरले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने वतावरण मिलाई दिनु पर्छ,’ भने । टाढा÷टाढाबाट आएका ‘डाक्टरलाई क्वाटर छैन्, नजिकका कर्मचारी क्वाटरमा बस्दै आएका छन्,’ अस्पतालमा व्यवस्था नभएको रेग्मीले बताए ।
अस्पताल सुधारमा निजि क्षेत्रको सहयोग
अस्पताल सुधारमा निजि क्षेत्रले सहयोग गर्ने कञ्चनपुर उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले बताए । ‘हामी सधै अस्पताल सुधारका लागि सहयोग नर्ग तयार छौं, निजि क्षेत्रले अस्पतालको विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ,’ भने ।